Sheeko Xiiso Badan Hooyo fahmi maysid!!!! ( Waa sheeko male awaal ah, Qaybta 1aad) by Huda-sh-yusuf . | Radio Borama
You are here : Radio Borama » FADHIGA SUBULAHA » Sheeko Xiiso Badan Hooyo fahmi maysid!!!! ( Waa sheeko male awaal ah, Qaybta 1aad) by Huda-sh-yusuf .
Sheeko Xiiso Badan Hooyo fahmi maysid!!!! ( Waa sheeko male awaal ah, Qaybta 1aad) by Huda-sh-yusuf .
Posted by admin on February 14th, 2012 12:40 AM | FADHIGA SUBULAHA
Yaasiin wuxuu ahaa inan yar oo 13 jir ah, wuxuu aad u jeclaa in uu ciyaaro kubada cagta iyo in uu daawado ciyaaraha feedhka. Maalin maalmaha ka mida, isagoo ku hor ciyaaraya gurigooda hortiisa, ayuu sheeda ka arkay aabbihii Nuur iyo hooyadi Qamar oo gurigooda hor taagan, wuxuu arkay hooyadi oo wajigeeda ka muuqato murugo, wuxuu u soo dhaqaaqay xagi ay joogeen waalidkii, balse intaanu sooba gaadhin ayeey hooyadi dhaqaaqday oo ay gashay gurigii. Wuxuu u yimid aabbihii, wuxuuna ku yidhi:
– Aabbo maxaa ku dhacay hooyo?
– Aabbo had’da ayeey ila joogtay. Waxba ma helin.
Yaasiin kuma qancin jawaabtaa aabbihii siiyay, wuxuuna u tagay hooyadii, dabadeed, wuxuu weeydiiyey, waxa ay ka murugootay ee wajigeeda badalay? Waxay ugu jawaabtay:
– Waxba iguma dhicin inaankaygiiyoow.
Mar labaad ayuu ku celiyay su’aashii, waxayna ugu jawaabtay:
– Immika garan meeysid.
Sidaa kagama hadhine, mar saddexaad ayuu ku celiyay, waxayna ugu jawaabtay:
– Hooyo had’da waad yar tahay oo garan maaysid, (balse nin raggii wuu gartaa!.)
Isagoo wali ku qanacsaneeyn, jawaabahaas kala duwan ee hooyadii siisay, ayuu gurigii ka baxay.
Muddo markay ka soo wareegtay, ayuu arkay hooyadii oo indhaheeda ilmo ku taalo. Intuu si naxdin leh xaggeedii ugu soo orday, ayuu gacantiisi kaga masaxay ilmadii, markuu ka masaxaba ilmo kale ayaa shagagax ka soo tidha. Intaasna wuxuu lahaa “hooyo maxaa kugu dhacay?” Qamar waxaay ugu jawaabtay inankeedii Yaasiin:
– Hooyo wax wayn iguma dhicin, balse wax baan dhibsaday, wax waayna ma ahaa. Sidii ayaay ugu sheegi wayday.
Yaasiin wuxuu u baxay dibada, wuxuuna fadhiistay kaabada gurigooda, su’aalo badan ayuu is waydiyay, wuxuuna mooday in ay ka ooyayso hooyadii ,dhibka ciyaalkooda ka waawayn isku hayaan, marna isaga ayaa is mooday, in uu ku dhib batay hooyadii. Si aad ah ayuu u dhibsaday oohiinta hooyadii. Gurigana cid kale, lamaay joogin oo wax uu sameeyo, ayuu garan waayay. Wuxuu ku soo noqday hooyadii, wuxuuna u keenay koob biyo ah, iyadoo cabaysa, ayuu hadana ku yidhi, hooyo maad mar uun ii sheegtid, waxa kugu dhacay? Waxaay mar kale ugu jawaabtay:
– Hooyo hadda waad yar tahay, maalin kale ayaad garan doontaa, (lakiinse nin rag ahise ma falo tan oo kale, haddu falana wuu ka qooma meeya, doqonna kama dhiidhiyo, mana dareemo).
Isagoo la yaaban jawaabta hooyadii, wuxuu ku yidhi:
– Hooyo doqonna ma ahi, walina ma noqon nin rag ah, balse markaan ogaado cidda ku dhibtay, waxaa igu ballana, in aan aniguna gaadhsiin doono in ka badan, inta ku gaadhay.
Wuxuu u tagay aabbihii , wuxuuna ku yidhi:
– Aabbo maxaa ka oohiyay hooyo?
Aabbahii wuxuu ugu jawaabay:
– Aabbo waan hurday oo maba ogaayn, in ay ooyaysay, lakiin waa dumaro, way iska qalbi jiliicsan yihiin.
Yaasiin baa hadalkii sii wato, wuxuu yidhi:
– Aabbo haddii ay dumarku qalbi jiliicsan yihiin, waxaay ka dhigan tahay, in ay innaga naxariis badan yihiin?
Aabbahii, wuxuu ugu jawaabay:
– Haa, balse wax aan waxba ahaayn, ayaay ka ooyaan!.
Yaasiin aabbihii, wuxuu kaloo u sheegay, in aanu shaqo tagi doonin oo u ka daalay shaqada, markaas ay tukaan yar ka ag furan doonan guriga agtiisa oo ay hooyadii iibin doonto, si biilka reerku uga soo baxo. Yaasiin wuu la yabay aabbihii balse wuu iska aamusay, wuxuuna halkaas ka gartay, wixii ka oohinayay hooyadii, in ay tahay, masuuliyadda uu aabbihii, dusha ka saaray hooyadii.Wuxuu xasuustay marar ay isku xanaaqeen walaalkii Xuseen iyo walaashii Raxma oo ka waynaa isaga, in ay Raxmi marmar ay ooyi jirtay, wuxuuna u haaystay, in dadka yaryari ay ooyaan, balse ayna ooyin dadka waawayni, jeer ooy geeri dhacdo mooye. Wuxuu u qaadan waayay, in ay hooyadii ooyday. Markii kowaad ee uu arkay hooyadii oo ooyaysa, waa mar uu dhintay awoowgii hooyo, hadase wuu garan waayay sababta ay u ooyday hooyadii. Wuxuu arkay dhawr jeer oo hooyadii iyo aabbihii ay wada hadlayeen oo hooyadii wajigeedu is badalay, wuxuuna is yidhi, aabbo iyo hooyo ayaa malaha is laayay, balse markuu eegay wajigii aabbihii, wax xanaaq ah, kamaay muuqan, wuxuuna garan waayay dhinac uu u qaado xaaladooda.
Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa waxa soo booqatay gurigooda ayeeydii hooyo, oo magaceeda la yidhaahdo Cibaado, waxaayna u keentay nac-nac iyo hariisad, Yaasiinse muu jeclayn hariisadda oo waxaay u keentay isaga xalwad. Markay tagaysay ayaay ku tidhi:
LA SOCO QAYBTA LABAAD …………………..
heated mirrors for toyota tacoma
ipad mini user guide for senior citizens
Ecash Opinions bonus
« Sawirada Ugu layaabka badan Aduunka ee Todobaadkan (Daawo Sawiro)
Mahad Naq ka socota Reer Muxumad Barkhadle. By: Khadra Mohomed Barkhadle »